Inaliti Ikubumbe Yenza-Ningbo MINGYU MOLD UKWENZIWA CO., LTD
Ikhaya>Ngathi>Inaliti zomngundo Yenza
Sinqwenela ukwabelana inkqubo yokwenziwa ngenaliti ezisisiseko kwinkampani yethu:
Products isebe uyilo inika ulwazi imveliso kwisebe uyilo ngenaliti sokubumbela, inaliti umngundo abayili ngokupheleleyo uhlalutyo iindleko ngeentsuku ezimbini zomsebenzi, kunye nokubonelela kumphathi R & D.
R & D ukukhululwa isebe "Ikubumbe Ukwenza Faka" kwisebe uyilo ziphene sokubumbela zeplastikhi emva eqinisekisiwe projekthi.
Inaliti ukungunda abayili baququzelele abasebenzi abafanelekileyo ukuphonononga isiseko seprojekthi kulwazi lwemveliso, kubandakanya ubume bemveliso, ulwakhiwo lomngundo, inkqubo yokupholisa, imbaleki, i-slag, i-venting, njl.
Emva kwe-eva1uation, i-injection mold mold designers iqala ukuyila isikhunta seplastiki, kuquka ukulungiswa kwe-3D, i-3D yokuhlukanisa, iindawo zokudibanisa iindibano, umzobo we-EDM, umzobo we-electrode njl. ukwenza isebe.
Inaliti abenzi ngumngundo eva1uate kwaye ufunde imizobo, kwaye odola izinto sokubumba ukuba akukho inkcaso, kungenjalo, ukunxibelelana nabayili inaliti zeplastiki ngumngundo.
Inaliti umngundo abenzi ahlole izinto sokubumba ngexesha emva kokuba izinto zifike mveliso, kwaye amalungiselelo amagcisa ukwenza imisebenzi locksmith, kubandakanya ukujika, ukusila, wokugaya, imingxunya isikrufu, amanzi ethwele umngxuma, umngxuma iziko, CNC ekrwada, njl amagcisa kufuneka ahlawule Ukuqwalaselwa kokuchaneka kwecala ngalinye lasekunene, thintela ukungabinanto kwendawo yeziko kunye nesiseko semveliso nganye, umda wokurhabaxa njl.
Emva kokulungiswa kobushushu, umenzi wenaliti yenaliti kufuneka abone ubunzima bayo kunye nohlalutyo lwe-metallurgical. Ngokubanzi, ubunzima obusisiseko i-46-50HRC, kulwabiwo olufanayo lwamanqaku e-9, efuna ukuba ubunzima bayo bohluke ngaphantsi kwe-1HRC. Uhlalutyo lwe-Metallurgical kufuneka lwenziwe kwinaliti yokubumba yenaliti ngaphambi kokuqhubekeka ukuqinisekisa ukuba akukho lucalucalulo, amanxeba, njl.
Ukucwangciswa kwe-Electrode, kukho ukucwangciswa okuhle kunye nokubi, i-spark yindoda eyi-0.08, i-spark yindoda eyi-0.2 (kuxhomekeke kwimeko eyiyo).
Phambi kokugqiba, umenzi wokubumba kufuneka enze i-engile elungileyo kwisiseko sokubumba, isidanga esime nkqo kufuneka sibe ngaphantsi kwe-0.02 mm, isidanga sokugqiba 1.6.
Ukusika ucingo, nceda uqaphele ukuba onke amalungu 'esiseko, andisa i-0.02mm kumngxunya wokufaka kunye nomngxunya weziko njengemvume yokunyamezelana, kwi-thimble engaqhelekanga, imvume yokunyamezelana ingu-0.04mm wobukhulu boqobo.
Ukugqitywa kwesiseko somngundo, kuya kusekelwa kwiibhentshi emva kokwenza ii-angles ezilungileyo, ngokushiya i-0.02 mm isweleke njengomda (ngaphandle kokujonga isixhobo sokunxiba).
Ukuqhutywa kwe-EDM, inkqubo ngokobungakanani bemizobo, i-0.08 entle, i-0.2 erhabaxa (ngokuxhomekeke kwimeko eyiyo), nikela ingqalelo kwiimpawu zomsebenzi xa kusetyenzwa, kulungiswa iintlantsi, ikhefu lingumda we-0.03-0.05 mm.
Umphezulu wembaleki kufuneka ukhazimlisiwe ukufezekisa u-6 okanye u-7 ukugqiba, umphezulu awuvumeli ipateni yentlantsi okanye imela.
Phambi kokuhlanganisa ukungunda ngenaliti yeplastiki, umenzi wokubumba kufuneka enze uhlolo olubanzi lwazo zonke izinto ezinxulumene noko ukuqinisekisa ukuba yonke into ikwimeko entle, kwaye uyayicoca kunye nokunyanga umhlwa.
Kwi-tryout yokubumba, i-injection mold molders, abenzi beeplastiki kufuneka baye kwisiza, benze uhlalutyo kunye nesisombululo esingaqhelekanga kwi-tryout yesikhunta, ukuphucula i-plastic mold mold kunye nenkqubo yokuzama ngokweziphumo, kwaye ugcwalise "Ingxelo ye-Mold Tryout".
Ngexesha le-100-150 lokujikeleza, imveliso yokugqibela ayinasiphako, isebe lemveliso lenza ishedyuli yemveliso, amagcisa alanda iinkqubo zemveliso, kunye nengxelo yesivuno kwisebe lokwenza inaliti yeplastiki.
Emva kokuzama ukungunda, isebe lokwenza inaliti lenza isicelo sokugcina kunye neefom "Zokwenza I-Mold Ukwenza" kunye ne "Ukuhlolwa Kokungunda".
Iisampulu ze-tryout ziya kuthunyelwa kumthengi ukuze zihlolwe okokugqibela kwaye zamkelwe.
Emva kokuvunywa kweesampulu zomthengi, umenzi wokubumba uya kwenza ipolishi yokugqibela kunye nokucoca ukungunda, ukutshiza iarhente yokulwa nomhlwa kumphezulu wokubumba, kwaye upakishe ukungunda ngefilimu kunye nokuthumela ibhokisi yomthi.
Hlela ukuthuthwa okanye ukuthunyelwa ukuthumela isikhunta kwindawo yomthengi.
Gcina unxibelelana nomthengi emva kokuba abathengi befumene ukungunda okutsha, kwaye unike isikhokelo kunye nenkonzo kwangexesha.
Amalungu asetyenziswa rhoqo
Brand okanye uMthengisi
Isiseko seentsimbi zomngundo
I-S45C, i-S50C, ne-P20
Core zomngundo kunye kwisisu
P2,718H, H13, NAK80,2316, S136,2344, njl
Inkqubo yembaleki eshushu SINO, YUDO, HUSKY, MASTER, HASCO, njl
Izinto zeplastiki ezisetyenziswa rhoqo
ISINOPEC / SABIC / LG / CHIMEI
ISABIC / IBHAYIBHILE / IKINGFA / IMITSUBISHI
PA, PA + nobushushu
I-DUPONT / DASF / EMS / DSM
IDUPONT / IPOLYPLASTICS
IBASF / IBAYERI / ISANTOPRENE
I-SABIC / BASF / IPOLYPLASTICS